Tallaalka lidka ku ah covid-19 ee Dalarna
Hadda adiga oo ka weyn 12 sano ayaa ballansan kara waqtigaaga tallaalka ka hortagga covid-19.
Xulo goobta tallaalka ee kuugu dhow oo akhri sida loo ballansado ballanta. Ha u wicin xaruntaada caafimaad in aad ballansato.
Adigu ma u baahan tahay caawimaad ballansi waqti ah? Waxaad wacdaa gobolka Ring Region Dalarna taageerada taleefanka ee lambarka taleefanka: 010-249 92 88. Taageerada taleefna waxa ay furantahay maalmaha caadiga ha inta u dhexeeysa 8:00-12:00, 13:00-16:00 waliba waxa aad ku hadli kartaan afka ingiriiska iyo afka iswiidhishka.
Sidan ayaad adiga iyo dadka kaleba uga ilaalinaysaa in aad qaadaan covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)
Waa sidan sida aad adigu u ballansanayso waqtiga tallaalka ka hortagga covid-19, ee gudaha Dalarna
Olof Ehrs, vaccinsamordnare